China Omenala Mere CNC Machining Parts Service ụlọ ọrụ na ndị na -ebubata ya BASILE
Akụkụ Ngwa igwe CNC emere nke ọma
Teknụzụ nhazi akụkụ ihe eji arụ ọrụ na -ezo aka na usoro nke ịgbanwe akụkụ ma ọ bụ akụrụngwa nke ihe eji arụ ọrụ site na akụrụngwa. Dika ihe dị iche na ụzọ nhazi, enwere ike kewaa ya na ịcha na nhazi nrụgide.
Ụzọ nhazi akụkụ ihe eji arụ ọrụ gụnyere: ịtụgharị, egwe ọka, planing, ịtinye, egweri, igwu ala, na -agwụ ike, ịkụ ọkpọ, ịkwa osisi na ụzọ ndị ọzọ. Ọ nwekwara ike ịgụnye ịkpụ waya, nkedo, ibe ya, electro-corrosion, nhazi ntụ ntụ, electroplating, na ọgwụgwọ ọkụ na ihe ndị ọzọ.
1. Na -atụgharị:
Enwere igwe kwụ ọtọ na igwe kwụ ọtọ; akụrụngwa ọhụrụ nwere igwe CNC lathe, ọkachasị na -edozi ahụ rotary;
2. Ịgba ọka:
Enwere igwe egwe ọka kwụ ọtọ na igwe egwe ọka kwụ ọtọ; akụrụngwa ọhụrụ nwere igwe igwe CNC, makwaara dị ka CNC machining center, ọkachasị nhazi uzo na mpaghara atụmatụ atụmatụ. N'ezie, ọ nwekwara ike iji axes abụọ ma ọ bụ axes atọ rụọ CNC Machining Center.
Ọ na -ahazi usoro atụmatụ mpaghara elu ala. N'ọnọdụ ndị nkịtị, ịdị elu ya adịghị elu karịa igwe igwe igwe;
Enwere ike ịghọta ya dị ka onye kwụ ọtọ, nke dabara maka nhazi arc okirikiri.
Enwere igwe na -egwe ọka, na -egweri okirikiri, na -egwe oghere n'ime, na igwe ihe, wdg.
6. mkpọpu ala:
Nọmalị, ọ bụ nhazi oghere.
7. Na -agwụ ike:
Ọ na -abụkarị oghere na -agwụ ike site na ngwaọrụ ma ọ bụ agụba na -agwụ ike, yana nhazi nke dayameta buru ibu, oghere nkenke dị elu, na ụdị ọrụ ọrụ ka ukwuu.
8. Ịkụ ọkpọ:
Ọ na-abụkarị ịkụ ọkpọ site na igwe ịpị ọkpọ, nke nwere ike ịpịa okirikiri ma ọ bụ oghere nwere ọdịdị pụrụ iche.
9. Ịcha na ịkwọ ụgbọ mmiri:
Ọ na -agbachapụ ihe site na igwe ịkwa osisi, nke a na -ejikarị na usoro oghere.
Igwe ọ bụla nwere ọtụtụ akụkụ akọwapụtara, na -enweghị akụkụ igwe, igwe ahụ ezughị oke. Ọ bụ ya mere akụkụ igwe ji arụ ọrụ kacha mkpa na ụlọ ọrụ n'ibu.
Site na mmepe nke akpaaka, teknụzụ nhazi igwe amalitela ime ka akpaaka nke mgbanwe na -aga n'ihu, ọ ga -arụrịrị ọrụ dị mkpa na mmepe nke ọha mmadụ n'ọdịnihu, ị mara, ike nke sistem bụ mmepe akụ na ụba mba. Na BMT, anyị na -etinye teknụzụ ahụ nke ọma, iji nye ndị ahịa anyị akụkụ igwe kacha mma. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mkpa, biko kpọtụrụ anyị ozugbo.
Tube efere 1
Efere tube 2
Ngwaahịa ndị ọzọ anyị mere
Nke gara aga: Akụkụ Metal CNC Machining
Osote: Akụkụ CNC Machining nkenke Machinery Parts
Onye Mmekọ CNC Machining Onye Omenala gị
Akara akpaghị aka, Igbe galvanized, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Igwe eji arụ ọrụ titanium, Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, Akụkụ Ngwa CNC,